Lisitr'ireo fitaovana marketing nomerika 29 | Martech Zone
Asabotsy, Aprily 25, 2015 Asabotsy, Aprily 25, 2015 Douglas Karr
Flora Pang dia mitazona matanjaka Lisitry ny fitaovana marketing maimaimpoana nataon'i Flora Pang fa mila mijery ianao. Manarona ireo fitaovana:
Fitaovana fanatsarana motera fikarohana maimaim-poana - ao anatin'izany ny fikarohana teny lakile, ny fizahana sy ny fanadihadiana ny tranonkala, ny fanadihadiana backlink, ny hakitroky ny teny lakile, ny crawlability site, ary ny atiny duplicate.
Fitaovana karama sy karama maimaim-poana - ao anatin'izany ny fanatsarana ny pejy fitobiana.
Fitaovana media sosialy maimaimpoana - ao anatin'izany ny fihainoana ara-tsosialy, ny fandaharam-potoana ara-tsosialy ary ny fanadihadiana ara-tsosialy.
Fitaovana marketing amin'ny atiny maimaimpoana - ao anatin'izany ny fanolokoloana votoaty, ny famokarana vokatra ary ny mpandalina lahatsoratra.
Fitaovana fifandraisana amin'ny besinimaro maimaim-poana - ao anatin'izany ny famantarana ny influencer.
Ny torohevitra tokana ananako rehefa mampiasa fitaovana maimaimpoana dia na dia toa mahasoa aza ny sasany, dia lany andro matetika. Matetika isika no mahita an'izany amin'ny alàlan'ny fitaovana fanoratana amin'ny Internet. Manondro olana lehibe indraindray izy ireo amin'ny tranokala - toy ny kaody manara-penitra - saingy aza mikasika ireo banga manakiana hafa akory - toy ny layout mahaliana izay ataon'ny mpampiasa amin'ny finday. Ny fomba fiteny taloha dia tena marina miaraka amin'ny fitaovana… azonao izay aloanao.
Tags: Fitaovana marketing amin'ny dizitalyflora pangfitaovana marketing nomerika maimaimpoanafampiharana marketing maimaimpoanasehatra marketing maimaimpoanafitaovana marketing maimaimpoanaFitaovana fanatsarana motera fikarohana maimaim-poana
ProOpinion: midira vondrom-piarahamonina atosiky ny fikarohana
Apr 28, 2015 ao amin'ny 2: PM PM
Misaotra amin'ny fitaovana lehibe!
Sep 13, 2016 amin'ny 5: 26 AM
Ity misy toro-hevitra avy amiko ho setrin'izany – SendPulse mailaka marketing service. Ampiasaiko amin'ny bilaogiko izany. Ny drafitra maimaim-poana dia avelao aho handefa mailaka maimaim-poana 15000 amin'ny adiresy tokana 2500 isam-bolana. Ny endri-javatra dia azo ampitahaina amin'ny Mailchimp's fa misy fameperana sy famerana kely kokoa amin'ny drafitra maimaim-poana. Manana serivisy webpush maimaim-poana koa izy ireo. Zahao hahitanao azy.
Jan 8, 2018 ao amin'ny 5: 29 AM
Lahatsoratra mahafinaritra! Amin'ny ambaratonga avo, ny marketing dizitaly dia manondro ny dokam-barotra atolotra amin'ny alàlan'ny fantsona nomerika toy ny milina fikarohana, tranokala, media sosialy, mailaka, ary fampiharana finday. Nampiasa fitaovana iray antsoina hoe AeroLeads ary tena nanampy betsaka tamin'ny firoboroboan'ny fandraharahako izany.